Maze Runner 4 weligiis ma ku soo laaban doonaa Shaashada Weyn? - Madadaalo
Maze Runner 4 weligiis ma ku soo laaban doonaa Shaashada Weyn?
Tani waa wax laga yaabo inaadan ka ogayn orodyahanka Maze
Ma jiraan wax hagaajin ah oo lagu soo celinayo orodyahanka Maze 4?
Goorma ayuu dhacayaa Premiere of Maze Runner 4?
Yaa ka soo muuqan doona Maze Runner 4?
Maxaan ka filan karnaa shirqoolka Maze Runner 4?
Iyada oo xoogga la saarayo digitization-ka iyo waayo-aragnimada isticmaale, waxaa kordhay tirada buugaagta ee loo beddelayo taxane. Sow sax maaha?? …. Waan ogahay tan !!!
Waxa kale oo aad nagu raacsan tahay in sheekooyinka iyo taxanahani ay yihiin kuwo soo jiidasho leh, taas oo ah sababta aad markii hore u timid boggayaga. Sababtoo ah waxay u gudbiyaan sheekada qaab ciyaareed cajiib ah, oo leh waxyaabo badan oo muuqaal ah, waxaa habboon in la daawado.
Maze Runner waa tusaale filimka trilogy oo si guul ah u dhammaystay seddexdii xilli ciyaareed, waxaanan ku haynaa horteena. Oo hadda waxaad baran doontaa dhammaan waxaad u baahan tahay inaad ka ogaato filimka Maze Runner 4, oo ay ku jiraan goorta uu soo bixi doono, cidda jili doonta, iyo wax kasta oo kale.
Laga bilaabo goos goos kooban, dareenka soo jiidashada leh ee Maze Runner-
Sheekadan-saynis-ka-sheekadu waxay ku salaysan tahay iibiyaha ugu wanaagsan The Maze Runner, kaas oo ku siiyay waxqabad iyo tacabur cajiib ah oo isku dhafan. Wax-soo-saarka saddex-geesoodka waxaa kormeera Ellen Goldsmith-Vein, halka qaybinta ay maamusho Fox Century 20.
Horay waxaan idiin heynaa sedex filim oo shacabka si wanaagsan uga faaloodeen , waxaana si wada jir ah u go’aamin doona xili afaraad iyo in kale...
Si lama filaan ah, taageeraha soo socda ee trilogy-kan ayaa hoos u dhigaya taxane kasta laakiin waxaa jira sababo, iyada oo la tixgelinayo kuwa sameeyayaasha ay sii wadi karaan ganacsigooda laakiin dhinaca mugdiga ah ayaa ah in ay u muuqato in soosaarayaashu aysan aad u xiiseyneynin inay sii fidiyaan.
Agaasimaha Maze Runner Wes Ball iyo qoraageeda sawir-qaade T.S. Nowlin wuxuu sheegay in rajadooda filimka afraad uu aad u yar yahay. Markaa, kama ilaalinayno filashadaada aadka u sarreysa ee filimka maadaama laga wada hadlay suurtogalnimada dhicitaankiisa aanay aad u sareyn.
Waxaan garwaaqsanahay in tani ay u soo bixi karto xoogaa adag, laakiin jaanisyada soo laabashadu waa mid aad u yar, ama, haddii aan si kale u dhigo, fursadaha sawirka afraad ee dib u cusboonaysiinta ayaa aad u hooseeya.
Si loo caddeeyo, ma jiro wax ogaysiis ah oo ka soo baxay hal-abuurayaasha, soo-bandhigayaasha, ama xubnaha tuuray in Maze Runner 4 uu ku jiro shaqada wakhtigan. Hadii ay filim sameeyayaashu go’aansadaan oo ay hore u sii wadaan, waxaa suurtogal ah in uu tiyaatarada dib ugu soo laaban doono ganacsi ahaan, haddiiba ay ahaan lahayd, iyo inuu noqon doono 2022-ka.
Nasiib wanaag, ilo aan rasmi ahayn qaarkood ayaa tilmaamaya in sheeko horudhac ah la isticmaali karo si loo dheereeyo qisada oo laga dhigo mid xiiso badan. Natiijo ahaan, ma hubno in la qaadan doono iyo in kale… Si kastaba ha ahaatee, waa inaad diyaargarowdaa.
Waxaan, shaki la'aan, kuu cusbooneysiin doonaa aaggan isla marka aan helno xog kasta oo lagu kalsoonaan karo oo ku saabsan taariikhda bandhigga filimka. Dhanka kale, ogow wax badan oo ku saabsan xubnaha Maze Runner 4.
Haddii Maze Runner franchise uu helo sheeko horudhac ah, waxaa jirta fursad wanaagsan in istuudiyaha uu soo bandhigo wajiyo cusub, taas oo macnaheedu yahay in xubnihii asalka ahaa, oo ay ku jiraan Dylan O'Brien, Kaya Scodelario, Will Poulter, Thomas Brodie-Sangster, Ki Hong Lee, Dexter Darden, iyo Patricia Clarkson, kuma soo laaban doonaan taxanaha.
Sidaa darteed, haddii bandhiggu soo noqdo, u diyaargarow inaad ku aragto wejiyo cusub iyo karti cusub oo shaashadda ah. Raac mareegaha xubnaha jilba si aad ula socoto dhammaan wararka cusub iyo macluumaadka iyaga ku saabsan.
Sababtoo ah waa laqabsiga suugaaneed, habka ugu fiican ee lagu ogaan karo waxa xiga ee sheekada waa in la raadiyo tilmaanta ilaha. Taasi sax maaha? Sidii hore loo xusay, dhammaan seddexdii filim ee hore waxay ku salaysan yihiin sheeko-yaal, ay ku jiraan Maze Runner, The Scorch Trials, iyo The Death Cure. Natiijo ahaan, midkood Amarka Dilka ama Xeerka Xummada ayaa noqon doona isha xigta ee laga yaabo in la baaro. Waxa kale oo aad arki kartaa taxanaha labada qaybood ee labadan filim.
Oo hadda waa arrin la sugayo soosaarayaasha ama xubnaha jilayaasha inay horay u hadlaan si loo ogaado waxa dhabta ah ee socda. In kasta oo aan fahamsanahay in qaar badan oo idinka mid ah aad u heellan yihiin sheeko sax ah, waxaan kuu sheegi karaa in wax la taaban karo aan laga helin mid ka mid ah ilaha la ansixiyay. Si kastaba ha noqotee, inta lagu guda jiro, waxaad wax badan ka baran kartaa mawduucan adiga oo la tashanaya su'aalahayaga inta badan la iska weydiiyo mawduuca.
Maqaalkani wuxuu si qoto dheer u eegayaa Maze Runner 4 wuxuuna ku ogeysiinayaa dhammaan horumarradii ugu dambeeyay ee ciyaarta. Si kastaba ha ahaatee, si aad ula socoto dhammaan horumarka mustaqbalka, oo ay ku jiraan haddii ama haddii bandhiguhu uu la qabsan doono sheeko horudhac ah, fadlan booqo shabakadayada.
Macluumaadka kore waa wax walba oo aan dooneyno inaan kula wadaagno Maze Runner 4, oo ay tahay inaad ka warqabto haddii aad taageere u tahay filimka. Haddii aad wax su'aalo ah ama walaac ah ka qabto taxanahan ama wax kale, fadlan igu soo ogeysii aagga faallooyinka. Waxaan halkaan u joognaa inaan ku caawinno, marka fadlan ha ka waaban inaad nala xiriirto.
Maxaad Ka Taqaanaa Xilliga Dabka Chicago 10?
Muxuu Ozzy ka Qabaa Badbaadayaasha?
manga stream akhri manga bilaashka ah online
xiddiga isboortiga 4 si toos ah u qulqulaya
barnaamijka filimada dhererka buuxa oo bilaash ah
sida loo joojiyo koontada netflix ee bilaashka ah
halkaas oo lagu daawado filimada internetka